Tattooba akara aka na aka | Igbu egbugbu
Ogbugbu ebo di na aka ya
Susana godoy | | Egbugbu, Egbu egbugbu na ogwe aka
Enwere ndị na-eche na egbugbu agbụrụ bụ egbugbu ndị na-adịghị ejiji, mana ọ nweghị ihe ọzọ karịa eziokwu ahụ. Ndị agbụrụ ka na-amasị ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ bụ na ejiji dị ezigbo iche ebe ọ bụ na ụdị egbugbu ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịkwụsị ịmasị, maka ndị ọzọ. Ha ka nwere ike bụrụ atụmatụ kachasị mma iji egbugbu n'ahụ.
Egbugbu agbụrụ na ogwe aka bụ ụdị egbugbu nke ụmụ nwoke na-ebukarị, mana ụmụ nwanyị nwekwara ike iburu ya ma ọ bụrụ na ọ masịrị ha. N’okwu uto enweghị ihe edere ede ma ihe dị mkpa bụ na onye tụrụ egbugbu agbụrụ na aka ya nwere ahụ iru ala na egbugbu ya.
Ndị agbụrụ ahụ nwekwara ike ịbụ ndị mara mma ma maa mma ma ọ bụrụ na ejiri akara dị mma eme ha. Tattoogbu egbugbu agbụrụ nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ndị nwere ụdị egbugbu a kemgbe ọtụtụ narị afọ. O nwere ike ịbụ ya kpatara na, rue taa, ndị mmadụ, ma nwoke ma nwanyị na mba ma ọ bụ akụkụ ụwa ọ bụla ka na-achọsi ha ike.
E nwere ọtụtụ ụdị ị nwere ike ịchọta ma ọ ga-adabere na mmasị gị ma ọ bụrụ na ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ. Y’oburu na ime ihe n’e masi gi, ighari imeghari ya n’ahu gi nke oma ka o wee diri nke oma. Tattoogbu egbugbu agbụrụ na ogwe aka bụ nhọrọ dị mma ma ị nwere ike ịhọrọ mpaghara nke ogwe aka kachasị amasị gị. O nwedịrị ndị na-egbu agbụrụ ahụ n’ụdị mgbaaka ka ọ dabara nke ọma na ogwe aka. Họrọ ihe na-akacha amasị gi ma họrọ ebe okacha mma nke masiri gi, marakwa na uzo ya si adi gi nma. Egbu egbugbu nke agbụrụ na ogwe aka, ọ bụrụ na ịchọrọ agbụrụ na mmalite ha, ọ ga-abụ egbugbu na-aga nke ọma.
1 Ofdị egbugbu agbụrụ maka ogwe aka
1.1 Dragọn nke agbụrụ
1.2 Ọdụm agbụrụ
1.3 Chadọ mkpọrọ
1.4 Mayan agbụrụ
Ofdị egbugbu agbụrụ maka ogwe aka
Dragọn nke agbụrụ
Dị ka anyị maara nke ọma, ọ bụrụ na e nwere otu n'ime ihe ndị e kere eke na-adị akụkụ nke echiche efu na akụkọ ifo, ndị a bụ dragons. Anyị ahụwo ha n'ọtụtụ ụzọ, ọkachasị na obere ma ọ bụ na nnukwu enyo. Ma ugbu a, ha gafere anyị akpụkpọ n'ụdị nke agbụrụ dragon tattoos. Enwere ọtụtụ nkọwa e nyere ha, ebe ọ dabere na ọdịbendị.
Maka ụfọdụ ndị ya na ndị okike ma ọ bụ ndị nchekwa, ya na ndị ọzọ, mmekọrịta ha dị nso ọnwụ. N'ezie mgbe anyị na-ekwu maka agbụrụ dragon tattoo, anyị nwere ike ịhazigharị ya na nkọwapụta nke kachasị masị anyị yana kwa etu anyị chọrọ, ọ dabere na akụkụ ahụ anyị ga-ewere ya. Nhọrọ dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche. Ma ha niile na-anọgide na akara nke ịchịkwa mgbe niile.
Kedu ka o si bụrụ ihe na-erughị, ọdụm bụ otu n'ime ụmụ anụmanụ kachasị ike. N'ihi ya, ha ewerewo ya dịka eze nke oke ọhịa. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka njikọ ya na ike ma ọ bụ obi ike yana ike. Na agbụrụ ọdụm agbụrụ ha na-emekwa ihe nnọchianya nke njirimara ndị a niile metụtara ụwa ime mmụọ. Ya mere, anyi aghaghi iburu n’uche na uzo a na-achoputa anụmanụ dika nke a. Nwere ike ịhọrọ iyi naanị ihu gị ma ọ bụ ahụ zuru oke maka mma ka ukwuu na akpụkpọ gị.
Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị anya mgbe anyị na-ekwu maka ya egbugbu agbụrụ. Dọ nwere ike icho mma n'akụkụ dị iche iche nke ahụ mana ha niile, ogwe aka bụ ọkacha mmasị ya. Akpadoro uzo ufodu ma mgbe ufodu ha di ka ogwu, ya mere ngosiputa ha gha adi iche n’ebe ahu. Ọ bụ eziokwu na n'ozuzu iwu, agbụ na-anọ n'okpuru mmegbu ụfọdụ. Ma kwa na anyị nwere ike inye ya nkọwa nke kachasị dabara nke ọ bụla. Ebe ọ bụ na agbụrụ ndị ahụ enweghị ndị ahụ emechiri emechi ha dị ka agbụ ndị bụ isi. N'ihi nke a, nnwere onwe na nkwenkwe bụ ihe na-emetụta ya.
Ndị Mayan yi ọtụtụ egbugbu nke ọ bụla n’ime ha nwekwara ihe ọhụrụ ọ pụtara. Ihe nnọchianya ya anọgidewo ruo ọtụtụ afọ ọzọ na ọ bụ ya mere ọdịnala ahụ ji ka dị taa. Ma nchebe na nkwenkwe ime mmụọ bụ nnukwu ihe pụtara egbugbu ya. Anmụ anụmanụ ma ọ bụ ụwa na anyanwụ pụtakwara n’etiti ha. Ọganihu na mgbanwe bụkwa akara ngosi nke na-esite na ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Egbugbu » Ogbugbu ebo di na aka ya
Mmasị niile tataujes
Zaghachi Juan Challco Lenes
Tattoo na-atọ ụtọ
Sdị akara mara mma maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke: ajụjụ gbasara okike?
Egbu egbugbu na Japanese, mụta ịmata ọdịiche dị na ha